Gunyana kuberekwa. Safaya. Ruvara rwebhuruu. Nyowani yekuvandudza 2021
safaya ndiro dombo rekuzvarwa raGunyana maererano nezvose zvekare uye zvazvino runyorwa rweganda rekuzvarwa rebwe.
Zvinorevei kuti dombo rekuzvarwa raGunyana?
Dombo rekuzvarwa idombo rinosanganiswa nemwedzi wekuzvarwa waGunyana. safaya.
safaya ibwe rinokosha, rakasiyana-siyana remamineral corundum, ine aruminiyamu oxide ine mitezo yakawanda yezvinhu simbi, titanium, chromium, vanadium, kana magnesium.
Chii chinonzi Gunyana redombo rekuzvarwa?
Ndepapi panowanikwa dombo rekuzvarwa raSeptember?
Chii chinonzi Gunyana rekuzvarwa mabwe?
Ndekupi kwaungawana Gunyana rekuzvarwa?
Ndezvipi zviratidzo zveZodhiac zvematombo ekuberekwa aGunyana?
Izvo zvinowanzoitika bhuruu, asi zvakasikwa mafirifi zvakare inoitika yeyero, yepepuru, orenji, uye girini mavara. Kazhinji, zvakasikwa mafirifi anotemwa uye anopukutwa mumabwe anokosha uye anopfekwa muzvishongo.
Bhuruu safaya iripo mumasanganiswa akasiyana siyana eprimari yayo bhuruu uye yechipiri hues, akasiyana matoni nhanho uye pamatanho akasiyana ekuzadza
Sapphires dzinocherwa kubva kune alluvial deposits kana kubva kune epasi pevhu mashandiro. Nzvimbo dzekutengesa migodhi yesafiri dzinosanganisira, asi hadzina kuganhurirwa kune nyika dzinotevera: Afghanistan, Australia, Myanmar, Cambodia, China, Colombia, India, Kenya, Laos, Madagascar, Malawi, Nepal, Nigeria, Pakistan, Sri Lanka, Tajikistan, Tanzania. , Thailand, United States, uye Vietnam.
Sapphires kubva kunzvimbo dzakasiyana dzenzvimbo dzinogona kuve nechitarisiko chakasiyana kana makemikari-asina kuchena kuwedzeredza, uye inowanzo kuve nemhando dzakasiyana dze microscopic inclusions.
Isu tinotengesa safaya mhete, zvishongo, mhete, zvishongo nezvimwe. Kana vazhinji vedu tichifunga nezvebwe rekuzvarwa raGunyana, nesafiri, isu tinofungidzira yakadzika, yehumambo bhuruu yegungwa.
Pane zvakanaka zvitema zvesafire zvinotengeswa muchitoro chedu
Dombo rekuzvarwa raSeptember, safaya, yaimbofungidzirwa kuchengetedza zvakaipa nehupfu. Zvaitendwa kuti nyoka ine huturu yaizofa kana ikaiswa mumudziyo wakagadzirwa nesafiri. Pachinyakare ibwe rinodiwa revapristi nemadzimambo, safaya inomiririra kuchena nehungwaru.
Virgo neRibra mabwe ese akasarudzwa dombo rekuzvarwa.
Chero zvaunenge uri Virgo neRibra. safaya ndiro dombo kubva munaGunyana 1 kusvika 30.
September 1 Virgo safaya
September 2 Virgo safaya
September 3 Virgo safaya
September 4 Virgo safaya
September 5 Virgo safaya
September 6 Virgo safaya
September 7 Virgo safaya
September 8 Virgo safaya
September 9 Virgo safaya
September 10 Virgo safaya
September 11 Virgo safaya
September 12 Virgo safaya
September 13 Virgo safaya
September 14 Virgo safaya
September 15 Virgo safaya
September 16 Virgo safaya
September 17 Virgo safaya
September 18 Virgo safaya
September 19 Virgo safaya
September 20 Virgo safaya
September 21 Virgo safaya
September 22 Virgo safaya
September 23 Libra safaya
September 24 Libra safaya
September 25 Libra safaya
September 26 Libra safaya
September 27 Libra safaya
September 28 Libra safaya
September 29 Libra safaya
September 30 Libra safaya
Natural yebhuruu safiro dombo rekuzvarwa riri kutengeswa mune yedu gem shopu
Bhuruu safaya 20K mhete dzegoridhe
Sirifi yebhuruu 2.11 ct
Sirifi yebhuruu 1.33 ct
Sirifi yebhuruu 1.62 ct
Sirifi yebhuruu 2.82 ct
Sirifi yebhuruu 1.51 ct
Sirifi yebhuruu 2.52 ct